Ama-balcony Lakeside | I-Studio Apartment 2 - I-Airbnb
Ama-balcony Lakeside | I-Studio Apartment 2
I-Balconies Lakeside iqoqo lezindlu ezintathu ezisanda kulungiswa eziseceleni kwechibi eLake Daylesford emangalisayo. Isakhiwo sesitayela sika-Edwardian sihlala osebeni lwechibi futhi sinikeza imibono emangalisayo evela efulethini ngalinye elinompheme walo wangasese kanye nokufinyelela okuqondile echibini. Imibhede emikhulu emikhulu, impahla yekhwalithi ephezulu, ukushisisa/ukupholisa kwesistimu ehlukanisayo, i-WIFI, ikhishi kanye nomshini we-coffee pod yizinto ezimbalwa izivakashi ezizozijabulela e-Balconies Lakeside ngesikhathi sokuvakasha kwazo.
Ifulethi lesitudiyo 2 lingelinye lamafulethi amakhulu amaBalconies Lakeside (indawo yonke engama-34sq.m) futhi linikeza ukubukwa okunwetshiwe ukusuka kuvulandi owela iLake Daylesford kuya emagqumeni angale. Izivakashi zingaphumuza indawo yokuphumula yesikhumba kanokusho ngencwadi kanye nengilazi yewayini lendawo noma zilale embhedeni owusayizi omkhulu futhi zijabulele umabonakude wesikrini esiyisicaba - esingabukwa kuzo zombili izindawo. Ngokunaka okucashile emininingwaneni yamathoni athulisiwe nemibala ihlinzeka ngokubaleka okunethezeka ezweni langaphandle, kuyilapho ukuthinta okucabangelayo kuqinisekisa ukuthi unakho konke okudingayo ukuze ujabulele ubusuku obubodwa.
I-Daylesford kanye nesifunda esiyizungezile sekuyisikhathi eside kubhekwa njengendawo ekhethekile yokwelapha, ukuphumula nokuzitika. Itholakala emagqumeni eGreat Dividing Range, lesi sifunda saziwa kakhulu ngeziphethu zamaminerali zemvelo futhi siyikhaya lezinye zezindawo zokudlela ezihamba phambili, amathilomu, imipheme, izindawo zokudlela kanye nezindawo zokuphuza utshwala zesifunda iVictoria okufanele zinikeze. Itholakala ngaphansi nje kwehora nesigamu ukusuka eMelbourne, lesi sifunda siyikhaya lezinye izindawo zemvelo ezinhle kakhulu zase-Australia ezigcwele izitshalo nezilwane zomdabu. Hlala nathi, futhi masizitholele i-Daylesford.
Ama-ejenti Esevisi Yezivakashi azotholakala ngesikhathi sokuhlala kwakho phakathi namahora okusebenza kanye nenombolo yokuxhumana yesimo esiphuthumayo yamahora angatholakali kunoma yini engavamile. Iwebhusayithi yethu ye-Discover Daylesford igcwele amabhizinisi endawo, izindawo ezithakazelisayo nezinto okumele uzenze ukuze uhlale, uhlole, uphumule, uzitike futhi Uzitholele i-Daylesford unyaka wonke.